Mutengo weHigh Frequency Induction Shrink Fitting Bearings
musha / Applications / Shrink Fitting / Induction Shinyira Yakakodzera Mabheyari
Category: Shrink Fitting Tags: fani induction inodzikira, mitezo inoderera, induction yakakodzera fani, induction kupisa fani, Induction inopera fitting, induction kuderera yakakodzera kupisa, induction shrink yakakodzera muchina, Shrink fitting, Dzorera fiti dzakakodzera
Kunyunyuta Kunokonzera Kukodzera Kuisa Maoko NeGBT High Frequency Kuisa Units
Chinangwa Kupisa gorosi rinotakura gungano rekushanda kwakakodzera
Zvinhu Zvesirivha mabheji, diameter 1 "ku3.5" (25.4 kusvika 89mm)
Kupisa 300ºF (150ºC)
Zvishandiso DW-UHF-6kW solid-state induction magetsi yakashongedzwa neiri kure kupisa chiteshi ine maviri 0.1 μF capacitors (yakazara 0.2 μF), induction-kudziyisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanakira ichi chishandiso.
Maitiro A multi-turn helical coil inoshandiswa kuburitsa iyo inodikanwa kupisa pateni. Iko kutakura kunoiswa mukati meiyo induction-yekupisa coil, yayo axis yakatarisa kune iyo axis yeiyo coil kuendesa yunifomu.
kupisa kumakero akasiyana ehukuru hwekutakura. Izvi zvinoita kuti kukura kwakaringana kwegungano rinotakura kwekudzikira kunotevera pamasimbi esimbi. (Iyo yakazara yakazara masheya anotakura inogona kudziirwa neiyo imwechete coil dhizaini.) Tembiricha-inoratidza pendi inosimbisa tembiricha yakafanana uye nguva inodiwa kusvika
tembiricha. Iwo magungano anotakura anopisa zvakanaka uye anosvika 300-350ºF (150-175 ° C) mumasekondi 30-60. Kamwe kadziya, mabheyaringi anodzikira pamasherufu pasina kushandisa
Mhedzisiro / mabhenefiti Iyo yakawanda-inotenderera helical coil inounza yunifomu kupisa kune iyo yakazara renji yeiyo inotakura saizi mune inochinja nzira. Kushandiswa kweiyi singlephase simba rekushandisa rinorerutsa kumisikidza uye rinosimudzira kutakurika: iyo induction system inogona kuiswa pangoro uye kuendeswa kunzvimbo dzekugadzira dzinoda kupisa kwekudzikira-kukodzera.
Induction Inopera Kukodzera
Shrink Fitting Stator neRotor Nekudzivirira